Laamaha amniga Dowladda oo howlgal sameeyay iyo Digniin la diray | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Laamaha amniga Dowladda oo howlgal sameeyay iyo Digniin la diray
Ciidamada dowladda Federaalka gaar ahaan kuwa Booliska ayaa howlgallo aminiga lagu xaqiijinayo waxaa ay ka sameeyeen Magalaada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud, waxaana la arkayay Ciidanka baaritaano ka sameynayo waddooyinka Magaaladaas.
Gaadiidka Miyaaradaha madow ayay Ciidanku baaritaano ku sameynayeen, waxaana Darawalada lagu arkayay inay gaariga ka fiiqaan Miyaaradaha Madow, waxaana Ciidamada ay su’aalo weeydiinayeen dhaliyarada waddooyinka hareerahooda ku caweynayay.
Sarkaal ka tirsan Ciidanka Booliska oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in ay howlgalka laga sameeyay Caabudwaaq uu Ujeedkisu ahaa sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka guud ee Magaalada iyo degaanada hoostega.
Sidoo kale Saraalka ayaa waxaa carabka ku dhuftay in laamaha amniga ay tallaabo cad ka qaadi doonaan cid kasta oo isku day-da inay dhibaateyso amniga Caabudwaaq, wuxuuna sheegay in laamaha amniga ay sii wadi doonaan howlgalka.
Ugu dambeyn Saraakiisha amniga Booliska ayaa shacabka ku dhaqan Magaalada Caabudwaaq iyo deegaanada hoostega ugu baaqay in ay la sheqeeyaan Ciidamada amniga, si looga hortega falalka amni darro ee xiliyada qaarkood ka dhaca halkaas
Maqaal horeSii hayaha xilka ra’iisul wasaaraha dalka oo guddoomiyay shir looga hadlay xaaladaha degdegga ah ee dalka ka jira
Maqaal XigaXildhibaanada Aqalka Sare oo muddo kadib Maanta kulan yeelanaya